७२ बर्षीय थामी आमाको जिम्मेबारीमा ४ अपाङ्ग सन्तान::Best News Experience from Nepal
७२ बर्षीय थामी आमाको जिम्मेबारीमा ४ अपाङ्ग सन्तान
रुपन्देही । बुुढेशकालमा छोराछोरीले बाबा आमालाई हेर्ने नेपाली परम्परा छ, भने गुुल्मी छत्रकोटका परीवारमा भने परीस्थीतीका कारण ७२ बर्षीय आमाले छोरा छोरीलाई हेर्नुु परेको छ।
कहिले काहीं यस्तो बिडम्बना हुुन्छ ,की एकै घरमा ४ जना परीवार अपाङ्ग जन्मीन्छन भनेर कल्पना पनी गर्न सकीदैन । यो बिडम्बना नै मान्नुु पर्छ। यो यथार्थ गुुल्मी क्षेत्र न. २ छत्रकोट गाउपालीका वडा न. ३ नरमका थामी परीवारमा भएको समस्या हो।
मानिस जिउनका लागी सपाङ्ग हुुनुु जरुरी छ, यदी हात खुुट्टा चल्न सकेनन् भने शारीरीक रुपमा काम गर्न र हिडडुुल गर्न नसकीने अबस्था हुुन्छ। शारीरीक रुपमा मात्र नभएर यदि मानसीक रुपमा पनी सपाङ्ग हुुन सकेमा बौद्धीक काम गर्न सकीन्छ र जिबन चलाउन सकीन्छ ।
तर थामी परीवारमा यि सबै कुुरा हुुन सकेको छैन् । मात्र ७२ बर्षीय आमा केशरी थामी यि चार सन्तानका लागी भगवान बनेकी छन्। सन्तानका बाबा पनि १० बर्ष अगाढी निधन भएपछी जिबन कष्टकर भएको आमाको भनाई छ।
मासिक १५ हजार खर्च
बाजेको तिनपुुश्ते ब्रिटीस पेन्सनका कारण जेनतेन चलेको परीवार आजको दिनमा निकै कठीन परेको छ। सामान्यतया उनीहरुको परीवार चल्नका लागी मासिक १५ हजार खर्च हुुने केशरी थामी बताउनुहुन्छ । तर अपाङ्ग र सपाङ्गको बिषयमा बिभीन्न मान्यताहरु रहेको पाउन सकीन्छ।
नेपाली परम्परामा अपाङ्ग हुुनुु भनेको कर्मको दोस भन्ने प्रचलन भएतापनी डा. हरुको भनाईमा भने नाता समबन्धमा हुुने बिबाह र बाबुु आमामा हुुने कमजोरीका कारण अपाङ्ग सन्तान हुुने गर्दछन ।
यि परीवारलाई पहीलोपटक रुपन्देहीका सहयोगी मन भएका केही युुवाहरुले सहयोग गरेका छन्।
केही नगद तथा दाल चामल तेल लगायतका करीब ४ महीनाको खर्च धान्ने गरी राहत सामग्री प्रदान गरीएको थियो। लाग्थ्यो तिनीहरुका घरमा भगवानको अवतार प्रकट भएर सहयोग गर्देछन् ।
ति युुवाहरु हुुन बुुटवलमा इन्टरनेट र केवल बितरक संस्था नागरीक केवल लिंकका प्रबन्धक मिलन थापा,बस्याल हार्डवयरका ब्यबसायी कृष्ण बस्याल,र बिभीन्न ब्यबसाय गर्ने चन्द्र बहादुुर महत,चिन्तामणी भुुषाल,शेषकान्त पाण्डे, रामप्रशाद र युुवराज काउचाको टिमले आगामी दिनमा पनी सहयोग गर्ने बाचा गरेको छ।
थामी परीवारलाई सहयोग गर्न चाहनेका लागी र सहयोगी मनहरुका लागी यो समाचार र खाता न. ले ध्यान आकर्षण गर्नेछ । अपाङ्ग सन्तानका आमा केशरी थामीको गुुल्मी बलेटक्सार शाखामा रहेको शाईन रेसुुङ्गा डेभलपमेन्ट बैकको खाता न ०१२१११००११३६५७००००००१ मा सहयोग गर्न सकीनेछ ।
आजसम्म अपाङ्ग भत्ताबाट मात्र गुुजारा चलाएका थामी परीवार वडा र गाउँपालीका बाट कुुनै सहयोग नपाएको गुुनासो सुुनेपछी थामी परीवारका लागी गुुल्मी छत्रकोट गाउँपालीका वडा न. ३ का वडा अध्यक्ष तेजकान्त अर्यालसंग कुुराकानी गर्दा आगामी दिनमा थामी परीवारलाई वडाका तर्फबाट सहयोग गर्ने बचन दिनुुभयो।
अपाङ्ग भएतापनी आत्मबोध उच्च मा.वी बाट एस एलसी सम्मको पढाई गरेका ३५ बर्षीय भुुपाल थामीले भने छत्रकोट ५ बाट सपाङ्ग नै बिबाह गरेका छन् जस्ले केही हदसम्म राहत मिलेको छ।